အိဖူး၏ စာမျက်နှာ: October 2009
ဂစ်တာတစ်လက်ကို ကျောမှာလွယ်လာသော လူတစ်ယောက်ကို ထိုလမ်းလေးထဲတွင် အမြဲတွေ့ရတတ်ပါသည် .. လမ်းလေး၏ ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် ပျဉ်းမပင်များ အစီအရီပေါက်နေသည် .. တခါတရံ သူပြန်လာသော ညဖက်အချိန်တွင် မြို့တော်သည် အိပ်မောကျလျက်ရှိသဖြင့် လမ်းလေးသည် လူရှင်းနေလေ့ရှိသည် .. သူကတော့ လူရှင်းသည် မရှင်းသည်ကိုပင် သတိမူမိပုံမပေါ် .. ခေါင်းငိုက်စိုက်ချပြီး တစ်လှမ်းချင်းသာ အဆက်မပြတ်လျှောက်နေသည် ..
တကိုယ်ရေတည်းလျှောက်လာသော သူ့ပုံစံသည် အထီးကျန်ဆန်လှသလို တဆက်တည်းမှာပင် လွတ်လပ် ပေါ့ပါးလှပါသည် .. လရောင်က သူ့ပေါ်တွင် သူ့ကျောပေါ်က ဂစ်တာလေးပေါ်တွင် ဖြာကျလျက် .. သူ့ဘေးနားတွင် သူ၏ပါးလှပ်သော အရိပ်ကသာ အဖော်သဟဲတစ်ယောက်သဖွယ် ကပ်ငြိပါလာသည် .. ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်နေသောညတွင် သူ့နှလုံးခုန်သံက တစ်ခုတည်းသောဆူညံသံဖြစ်သည် .. သူလမ်းလျှောက် လာသည်ကို ကြည့်မိလျှင် ထိုအရာနှစ်ခုကိုသာ သတိထားမိပေလိမ့်မည် .. သူ့အရိပ်နှင့် သူ့နှလုံးခုန်သံ ..
သူ့ပုံစံသည် လောကကြီးတွင် လမ်းလျှောက်စရာကလွဲလို့ ဘာမှလုပ်စရာမရှိသလိုပင် .. ပူပင်ခြင်းမရှိသလို ပျော်ရွှင်ခြင်းလည်း မရှိပါ .. ခြေတစ်လှမ်းနှင့် နောက်တစ်လှမ်းကြားတွင် စဉ်းစားတွေဝေမှုမပါ .. တွန့်ဆုတ်မှုမပါ .. ထို့အတူ တက်ကြွမှုမပါ နိုးကြားမှုမပါ .. ခြေလှမ်းများသည် ဗလာသက်သက် .. ပန်းတိုင်မသိသလို ခရီးဆုံးတွင် စောင့်ကြိုနေမည့်သူလည်းရှိပုံမပေါ်ပါ .. သို့သော် တစ်စုံတစ်ခုကို တွေ့ကောင်းတွေ့နိုး ရှာဖွေနေသလို ..
သူသည် အိပ်မက်ကော မက်တတ်ပါသလား .. တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် ခရမ်းရောင်ပျဉ်းမပန်းများ ကြွေကျ နေသော .. ဖြာကျနေသော လရောင်တို့ဖြင့် ပြီးပြည့်စုံနေသော လမ်းမကျယ်လေးသည် အိပ်မက်မက် ချင်စရာကောင်းလှပါသည် .. ထိုကဲ့သို့ လှပသောလမ်းလေးကိုပင် သတိမပြုလောက်အောင် သူ့အတွေးများက တစ်ခုခုပေါ်တွင် စူးစိုက်နေပုံရပါသည် ..
သို့မဟုတ် သူအိပ်မက်မက်နေခြင်းဖြစ်မည် .. လမ်းလေးကိုမက်နေခြင်း မဟုတ်သည့်တိုင် တစ်ခုခုကို အိပ်မက်မက်နေခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည် .. လမ်းလေးထက်လှပသည့်အရာ .. လရောင်ထက်ပိုလင်းသောအရာ .. သူ့ဂစ်တာလေးထက် သံစဉ်ပိုချိုမြပြီး .. သူ့နှလုံးကို ဒိထက်ပိုခုန်နိုင်အောင် လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည့် အရာတစ်ခုခု အကြောင်းကို သူအိပ်မက်မက်နေလိမ့်မည် .. ချိုမြိန်သောအိပ်မက်မက်နေသူနှင့်တူသလို အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုကို အမြဲတွေးနေသူနှင့်လည်း တူနေသေးသည် ..
တစ်ည .. မိုးရွာပြီးစမို့ ပျဉ်းမပင်များစိုစွတ်ကာ လမ်းမသည်လည်း မိုးနံ့တသင်းသင်းပျံ့လျက်ရှိသည် .. သူပြန်လာသည် .. ခရမ်းရောင် ပန်းလေးတစ်ပွင့်က လေနှင့်အတူလွင့်ကာ သူ့ရှေ့သို့ ရောက်လာသည် .. ရုတ်တရက် အရှိန်သတ်လိုက်သဖြင့် သူ တုံ့ ကနဲရပ်သွားသည် .. သူ့ရှေ့က ခရမ်းရောင်ပန်းလေးကို ကြည့် နေသည် .. အရင်က မမြင်ဖူးသောအရာတစ်ခုကို မြင်လိုက်ရသည့်အတိုင်း ပန်းလေးကိုငေးကြည့်နေသည် .. သူသည် အိပ်မက်မှ နိုးလာသည်နှင့်တူနေတော့သည် .. ပန်းလေးကို ယူလိုက်ပြီး သူဆက်ထွက်သွားပါသည် .. ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်သို့ တွဲလောင်းချထားပြီး လွှဲရမ်းခြင်းမရှိသည့် သူ့လက်ထဲသို့ ပန်းပွင့်လေးပါသွားသည် .. သူ့အိပ်မက်ကို ပိုပြည့်စုံအောင် သို့မဟုတ် အိပ်မက်မှ နိုးထအောင် ပန်းလေးက လုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည် ထင်သည် ..
သေချာသည်ကတော့ ထိုနေ့မှစ၍ သူ့ကို လမ်းလေးထဲတွင် ဘယ်တော့မှမတွေ့ရတတ်တော့ပေ .. မြို့တော် အိပ်မောကျနေချိန်တွင် လရောင်လင်းသည့် လမ်းလေးထဲသို့ ဂစ်တာတစ်လက်ကျောမှာလွယ်လျက် လမ်းလျှောက်လာတတ်သည့် သူသည် လိုချင်တာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားပုံရသည် ..
သူသည် အိပ်မက်မက်တတ်သူ ဟုတ်ပါသလား ..
အိပ်မက်လှလှမက်တတ်သူလား .. အိပ်မက်ဆိုးများဖြင့် နိုးထနေတတ်သူလား ..
ပန်းပွင့်လေးကြောင့် သူအိပ်မက်မက်မလား .. ထိုပန်းလေးကြောင့် အိပ်မက်ကလန့်နိုးမလား ..
သို့မဟုတ် ပန်းပွင့်လေးက သူ၏ ပျောက်ဆုံးသွားသောအိပ်မက်များလား ..
Posted by အိဖူး at 2:58 AM2comments:
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က သူလက်ထပ်တော့မယ်ပြောတယ် .. သူ့မှာ စေ့စပ်ထားတဲ့လူရှိတယ် အဲ့ဒိလူနဲ့ပဲ လက်ထပ်မယ်ဆိုတာသိရက်နဲ့ “အိဖူးရေ .. ငါလက်ထပ်တော့မယ်”လို့ သူပြောလာတဲ့အချိန်မှာ တော်တော် လေးကို အံ့သြသွားခဲ့တယ် .. ကျွန်မတို့အသက်က ၁၈ နှစ်ပဲရှိသေးတာပါ .. ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ လက်ထပ်ရတာ ကောင်းပေမဲ့ ၁၈ နှစ်မှာတော့ လက်မထပ်ချင်မိပါဘူး .. စတေးလိုက်ရမဲ့ လွတ်လပ်တဲ့လူငယ်ဘဝလေးကို နှမြောမိတယ်လေ .. အခုမှ ဘဝမှာ အလန်းဆန်းဆုံးနေ့ရက်တွေ ရခါစရှိသေး .. ချက်ချင်းပဲအပြီးသတ်ရတော့ မှာလားနော် .. ကျွန်မက အဲ့လိုမျိုးပြောတော့ သူငယ်ချင်းက ငြင်းတယ်လေ .. နင်တကယ်ချစ်တဲ့လူရှိလာတဲ့ အခါ နားလည်လာမယ်တဲ့ .. အဲ့အချိန်ရောက်ရင် သူ့ကို (ကျွန်မချစ်သူကို) ပိုင်ဆိုင်ရဖို့အတွက် အရာရာကို စွန့်လွှတ်နိုင်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ .. ကျွန်မကတော့ သူငယ်ချင်းကို ခေါင်းပဲ ခါပြလိုက်မိတယ် .. “အရာရာကို စွန့်လွှတ်သွားနိုင်မယ်”တဲ့ .. တစ်မျိုးကြီးပဲ ..
“အရာရာ” .. အရာရာဆိုတာဘာတွေလဲ .. ငွေကြေးလား ပျော်ရွှင်မှုလား လွတ်လပ်မှုလား အသိုင်းအဝိုင်းလား .. ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလား စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလား .. အားလုံးပဲလား .. အရာရာဆိုတဲ့ထဲမှာ ကျွန်မတို့ရဲ့အမူအကျင့် တွေ နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုတွေရောပါလား .. စွန့်လွှတ်နိုင်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ထဲမှာ အမူအကျင့်တွေကို ပုံစံပြောင်း တာရောပါလား .. လူသစ်စိတ်သစ်ဖြစ်သွားတာမျိုးကိုခေါ်လား .. ဘယ်လိုဟာမျိုးကိုခေါ်တာပါလိမ့် ..
လူတစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ချင်တာ ပိုင်ဆိုင်ရဖို့အတွက်နဲ့ အရာရာကိုစွန့်လွှတ်နိုင်မှာလား .. နေထိုင်နေတဲ့ ကိုယ့်ဘဝပုံစံကို ပြောင်းလိုက်ရမှာလား .. နောင်တစ်ချိန်မှာ ကျွန်မတကယ်စွန့်လွှတ်နိုင်တာ မစွန့်လွှတ်နိုင်တာ အပထား .. အဲလိုပြောသွားတာကိုပဲ ပိုမခံနိုင်ဖြစ်နေသလိုပဲ (ဘာမှလည်းဆိုင်ဘူးနော်) .. ကျွန်မက နည်းနည်း တော့အတွေးခေါင်တယ် .. အခုကိစ္စကို မနေနိုင်မထိုင်နိုင်တွေးနေတာကိုပဲကြည့် .. သူငယ်ချင်းကဖြင့် သူ့အိမ်ထောင်နဲ့သူအဆင်ပြေလို့ ပျော်လို့ရွှင်လို့ .. ကျွန်မမှာတော့ တွေးလိုက် မကျေနပ်လိုက် .. လက်ထပ်သွား တဲ့သူငယ်ချင်းကို နှမြောလိုက်နဲ့ ကိုယ့်ဒုက္ခကိုယ်ရှာနေမိတာ .. ကြာတော့လည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ်စိတ်တိုလာတယ် ..
နောက်ထပ်စိတ်ကိုဆွပေးတဲ့ သတင်းတစ်ခုကလည်း အဲ့သူငယ်ချင်းဆီကပဲကြားတာပဲ .. ကျွန်မတို့ရဲ့ သူငယ်ချင်းထဲက နောက်ထပ်တစ်ယောက်က (အထက်တန်းတုန်းက သူငယ်ချင်းလေးယောက်ရှိခဲ့တယ်) ကလေးမွေးပြီးသွားပြီတဲ့ .. ဘုရားရေ .. ပြောပြတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မကြက်သီးတောင်ထသွားတယ် .. နောက်တော့တွေးမိလာတာက “ကောသလအိပ်မက် ၁၆ ချက်” ထဲကအတိုင်းပါပဲလားလို့ ..
အပြင်မှာမြင်ရင်တော့ အဲ့လင်မယားကို ဘယ်သူက ကလေးရှိတယ်လို့ ထင်မှာလဲနော် .. တဆက်တည်းပဲ ကလေးမွေးလိုက်တဲ့သူငယ်ချင်းကိုတော့ ချီးကျူးတယ် .. မွေးရဲတဲ့သတ္တိရှိလို့ပါ .. ဘယ်လိုပဲပြောပြော သူလည်း အိမ်နဲ့တော့ အတိုက်အခံတွေကြုံရမှာပဲ .. ဖျက်မချလိုက်ပဲ မွေးပစ်လိုက်တဲ့သတ္တိကတော့ တကယ့် အမေစိတ်ဓါတ်ပဲထင်ပါတယ်နော် .. အပြင်မှာတွေ့တော့လည်း အရင်ကလိုမဟုတ်ပဲ တည်ငြိမ်သွားလိုက်တာ .. အရင်ကဆိုကျောင်းမှာ ဆပ်စလူးစိန် အာပြဲမလေးကိုး .. သူလည်း သူ့ရည်းစား အဲလေ သူ့ခင်ပွန်းကို တော်တော်ချစ်ပုံရတယ် .. သူဆိုရင်ကော အရာရာကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့တာပဲလား .. မိဘတွေရဲ့အငြူစူခံပြီးမှ မွေးလာတဲ့သူ့သမီးလေးက သူ့ဘဝပါတဲ့ ..
အချစ်ဆိုတဲ့အရာကလည်း တော်တော်ဆန်းကြယ်သားပဲ .. အရာရာကိုရင်ဆိုင်နိုင် အရာရာကို စွန့်လွှတ်နိုင်လောက်အောင်ပဲ တန်ခိုးကြီးတယ်ထင်ပါ့ .. တွေးရင်တော့ ရူးတောင်ရူးသွားမလားပဲ .. ပထမသူငယ်ချင်းနဲ့တုန်းက လက်မခံချင်တဲ့ကိစ္စက ဒုတိယသူငယ်ချင်းနဲ့တွေ့မှပဲ ပိုပြီးတအံ့တသြကြီးဖြစ်လို့ .. ပျော်ရွှင်ရလိုက် စိတ်ညစ်ရလိုက်နဲ့ ပူလိုက်အေးလိုက်ဖြစ်နေတဲ့အချစ်ဆိုတာကြီးက လူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာ ဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်လာလဲမသိဘူးနော် .. လာလိုက်သေးတယ် “အရာရာကို စွန့်လွှတ်သွားနိုင်တယ်” တဲ့ .. ဟုတ်လို့လား မကျေနပ်ပါဘူး ..
ခုနေတော့ မကျေနပ်ဘူးပဲ အော်နေတဲ့ကျွန်မလည်း ဘယ်အချိန် အဲ့စကားကို ပြုံးပြုံးလေးလက်ခံမိမလဲမသိ ....။
Posted by အိဖူး at 8:00 AM2comments:
ငယ်သည် လူတွေအတွက် တစ်ခုခုပေးစွမ်းနိုင်သူ အမြဲဖြစ်ချင်ခဲ့သည် .. အနည်းဆုံးတော့ ငယ့်ကို ချစ်ခင်သူတွေနှင့် ငယ်ကချစ်ခင်သူတွေအတွက် အမြဲရပ်တည်ပေးချင်ပါသည် .. စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပဲဖြစ်ဖြစ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့တွေအတွက် (သူတို့ရဲ့လိုအပ်မှုတွေအတွက်) ဖြည့်ဆည်းပေးချင် သည် .. ပြီးတော့ ငယ်က အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများကို သိပ်တွယ်တာတတ်သည် .. သူတို့တွေနှုတ်ခမ်းမှ အမှတ်တမဲ့ထွက်လာသော စကားလေးတွေကို ငယ်ဂရုတစိုက်နားထောင်ဖြစ်သည် ..
မျက်နှာအဆီပြန်တတ်သော သူငယ်ချင်းအတွက် အဆီစုပ် Tissue တစ်ထုပ် .. ဆံပင်ကောက်ထားသော ဆံသားမာ၍ဖြီးသင်ရခက်သော သူငယ်ချင်းအတွက် (ဆံပင်အကောက်သီးသန့်) ခေါင်းလျှော်ရည်တစ်ဘူး .. တီရှပ်အမည်း ဒီဇိုင်းစုံဝတ်တတ်သော ဘော်ဒါအတွက်လည်း ဒီဇိုင်းမိုက်မိုက် တီရှပ်အမည်းလေးတွေ (လက်ထဲပိုက်ဆံရှိချိန်နှင့် ဈေးလည်းသင့်တော်လျှင်) .. ခဏခဏစိတ်ညစ်ရတတ်သော သူငယ်ချင်း အတွက်လည်း ငယ်ကရင်ဖွင့်ဖော်အဖြစ် အမြဲအသင့်ရှိသလို ကလေးဆန်၊ တဇွတ်ထိုးလုပ်တတ်သော ညီအတွက်လည်း (ယောက်ျားလေးနှင့်မိန်းကလေးဆိုပေမယ့် ညီအစ်ကိုဟု သူက သတ်မှတ်သည်) သူ့စိတ်ကိုထိန်းကျောင်းပေးဖို့ ငယ်သည်တက်ကြွနေမိသည် ... ငယ့်ကြောင့် စိတ်ချမ်းသာရမည့် လူများအတွက်ဆိုလျှင်လည်း သူတို့စိတ်ချမ်းသာအောင် တခါတရံစွမ်းဆောင်ပေးလေ့ရှိပါသည် ..
ထို့ပြင် တစ်ဦးချင်းစီ၏ ဖြစ်လာသမျှ စိတ်ညစ်စရာတွေ ပြဿနာတွေတွေကို သူငယ်ချင်းများကြားတွင် ဒိုင်ခံနားထောင် အကြံပေးလုပ်တတ်သည်မှာလည်း ငယ်တစ်ယောက်တည်းရှိပါသည် .. ထိုအခါများတွင် သူတို့လိုခံစားကာ အတူစိတ်ညစ်လိုက် .. အကြံပေး ကူညီလို့ရလျှင် အားကြိုးမာန်တက်ပြောပြလိုက် .. ပြီးဆုံးသွားလျှင် သူတို့နဲ့အတူပျော်ရွှင်လိုက်နှင့်မို့ ဟိုးအရင်ခင်မင်စအချိန်တွေက ငယ့်ကိုသူတို့တွေ နားမလည်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရသေးသည် .. ယခုတော့ သူတို့တွေ ငယ့်ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သလို ချစ်ခင်ကြတာကိုမြင်တော့ အခြောက်တိုက်ဘဝင်တွေမြင့်နေရသေးသည် .. ထိုသို့ခံစားရသည်ကိုလည်း နှစ်ခြိုက်နေမိသည် .. ငယ့်ကို ထိုသို့ချစ်ခင်ကြသည်ကိုလည်း ဂုဏ်ယူမိသည် .. အနည်းဆုံးတော့ ငယ်က သူတို့အတွက် အဓိကမကျသည့်တိုင် အရေးတော့ပါပါသည် .. ငယ်သည် ဘာလို့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်အတွက် ရပ်တည်ရုံသာမက သူများအတွက်ပါ ရပ်တည်နေလဲမသိပါ .. ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ရသည့်အတွက် ငယ်ပျော်ရွှင်သည် .. ဒါ့ကြောင့် ယနေ့ထိတော့ ထိုပုံစံဖြင့်သာ နေထိုင်လာပါသည် .. ကြာလာတော့ သူတို့တွေအတွက် မလုပ်ပေးနိုင်တာ ဘာမှမရှိဟု ထင်လာသည် .. ရင်းရင်းနှီးနှီးပေါင်းသင်းသူတွေအတွက် ငယ်က တစ်ခုခုလုပ်ပေးခဲ့သည်ချည်းပင်ဖြစ်သည် .. ထိုသူတွေအတွက်တော့ ငယ်သည် တကယ့်ကို အပေးသမားသက်သက်ပင် .....
သို့သော် သို့သော် ........
သူ့အတွက် ငယ်ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါ .. ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ရုံမက ဘာမှလည်းမပြောပေးနိုင် .. ငယ့်အနေဖြင့် မဖြည့်ဆည်း မပေးစွမ်းနိုင်သူက သူဖြစ်နေသည့်အတွက်လည်း ဝမ်းနည်းလို့မဆုံး .. ငယ့်အတွက် အရေးပါသောလူတစ်ယောက်သည် ငယ်နှင့်အဝေးဆုံးမှာရှိသည် .. အဝေးဆုံးကလူအတွက် ရုပ်ဝတ္ထုများ ဖြင့်မဟုတ်တောင် စိတ်ဓါတ်အင်အားတစ်ခုအဖြစ် ငယ်ရပ်တည်ချင်ပါသည် .. ငယ်ကသာ သူ့ကိုစိတ်ဓါတ် အင်အား မပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း သူကတော့ ငယ့်အတွက်ဆေးတစ်ခွက်ဖြစ်သည် .. ငယ်စိတ်အားငယ် နေချိန်များ စိတ်ရှုပ်ရသောအချိန်များတွင် သူပြောသောစကားများက တစ်ခွန်းကိုတစ်ခွန်းဆိုသလို ထိရောက် လှသည် .. တကယ်လည်း သူ့စကားတွေနားထောင်ရင်း အားတင်းခဲ့ပါသည် .. သူက ငယ့်ကို “ပြောစကား နားထောင်တဲ့ကလေးမ” ဟုချီးကျူးလျှင် ငယ်အူမြူးနေရသည် .. တစ်ခါတွင်တော့ ငယ့်ကို လောဘကြီးသည်ဟု သူကစွပ်စွဲဖူးပါသည် .. လူတွေကို ဂရုစိုက်လွန်းသော ငယ့်အား “လူတွေကို ဂရုမစိုက်နဲ့” .. “ကိုယ့်အတွက် ကိုယ်ရပ်ကြည့်စမ်းပါဦး” စသည်ဖြင့်ပြောခဲ့သည် ..
ငယ့်အတွက်ပဲပြောဆိုလုပ်ကိုင်ပေးနေတာပဲ .. ငယ်ကတစ်လှည့် အားပေးစကားလေးပြောပါရစေဦးဟု ငယ် ပြောသောအခါ “ကိုယ့်အတွက် အဲဒါတွေမလိုဘူးလေ ငယ်ရဲ့” ဟူ၍သာကြားရသည် .. ထိုအကြောင်းဖြင့် သူ့ကို ငယ်ရန်စွာမိသည် .. စကားတွေကို ရောကောသောကောလုပ်ကာ သူကရှောချလေ့ရှိပါသည် .. နောက်ဆုံး ငယ်ကလေသံကိုလျှော့ပြီး “ဘာလို့အဲလိုဖြစ်နေရတာလဲ” ဟုမေးမိလျှင် သူက “ကိုယ်ဘာကိုမှ ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောပြချင်ဘူးကွယ်” ဟုပြောလာသည် .. “ဘယ်သူ့ကိုမှ” ဆိုသည့်စကားက ငယ့်ရင်ကို ခပ်ပြင်းပြင်း လှုပ်ခတ်သွားစေပါသည် ..
သူ့အတွက်တော့ ငယ်ဟာ ဘာမှမဟုတ်ပါလားဟုတွေးရင်း ငိုနေမိသည် .. တခြားလူတွေအတွက် ရပ်တည်ပေးနိုင်ခဲ့သောငယ်သည် အဖြည့်ဆည်းပေးချင်ဆုံး“သူ” နဲ့ကျမှ မထူးခြားသူဖြစ်ရလေသည် .. ထိုကိစ္စနဲ့ ပက်သတ်ပြီး ငယ်မကျေမနပ်ဖြစ်နေသည်ကို သိသောအခါ သူက “ငယ်ဟာ ဘာလို့မရင့်ကျက်သေးတာလဲ” ဟု မချင့်မရဲလေသံလေးဖြင့် ပြောလေသည် .. အဆုံးတွင်တော့ ငယ်သည် မခံမရပ်နိုင်စွာဖြင့် ပေါက်ကွဲတော့ လေသည် .. ထိုအခါ သူကတအံ့တသြကြည့်နေရင်းဖြင့် “ငယ် .. ဒါကို ဒီလောက်ကြီး serious ဖြစ်နေမယ် မှန်းမသိခဲ့ဘူး” တဲ့ .. ငယ်က သူ့ကို ဒေါသတကြီးဖြင့် အော်ဟစ်သောအခါတွင်တော့ ငယ့်ကိုဆွဲထိန်းလိုက်ပြီး “အဲဒါတွေက ဘာအရေးကြီးလို့လဲ .. ငယ် ကိုယ့်အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တာတွေ အနစ်နာခံတာတွေက ဘာများဖြစ်လာမှာလဲ .. ငယ့်ဖြစ်တည်မှုတစ်ခုနဲ့တင် ကိုယ်လုံလောက်နေပြီ .. ငယ့်ဆီက တခြားဘာမှ မလိုချင်ဘူးလေ” ဟု တိုးလျသောလေသံလေးဖြင့် ပြောလာသည် ..
သူ့ဆီက ထိုစကားမျိုးမကြားခဲ့ဖူးသည့်အတွက် ငယ်တစ်ခဏတာဆွံ့အသွားသည် .. ဘာမှမပြောဘဲနေမိစဉ် သူထွက်သွားပါသည် .. သူထွက်သွားပြီး အတန်ကြာတော့မှ ငယ်မတ်တပ်ထရပ်လိုက်မိသည် ..
ထိုအချိန်မှစပြီး ငယ်သည် ငယ့်အတွက်ငယ်သာ ဖြည့်ဆည်းလေတော့သည် ... အနည်းဆုံးတော့ သူ့အတွက် “စကားနားထောင်တဲ့ကလေးမ” အဖြစ် ရပ်တည်နေမိသည်ပေါ့ ....။
Posted by အိဖူး at 1:14 AM4comments:
အင်း .. အဲလိုပေါ့နော် .. သီချင်းဆိုခြင်းဆိုသည်မှာ အိဖူးရဲ့ အကောင်းဆုံးစိတ်ဖျော်ဖြေတဲ့ နည်းလမ်းလေးတစ်ခုပါ .. ဝမ်းနည်းရင် စိတ်ညစ်ရင် ပျော်ရင် အူမြူးနေရင် ဘာဖြစ်ဖြစ် ပါးစပ်မှာ သီချင်းတစ်ပုဒ်ရှိနေတတ်တယ် .. ဆိုနေမိတဲ့သီချင်းတွေကတော့ အများကြီး .. အဲ့ထဲကမှ စိတ်နဲ့အတိုက်ဆိုင်ဆုံးကို ရွေးပေးရရင် .........
“မိုးလေးဖွဲတုန်း သတိရတယ် မြင်နေတယ် ပြတင်းတံခါးဆီပဲ .. သွားလို့မော့ကြည့် ပြောလိုက်ချိန် တစ်ကိုယ်ရေတည်း မိုးစက်တွေအလယ်” ဆိုတဲ့ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုနဲ့ မျိုးကျော့မြိုင်ရဲ့သီချင်းလေး ... မိုးတွင်းကုန်ဆုံးတော့မယ် .. မိုးရာသီကိုချစ်တဲ့ အိဖူး အတွက်တော့ ငိုချင်စရာကြီး .. ဒီကြားထဲကမှ ခုတလော သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို တအားနဲ့အရမ်းလွမ်းဆွတ်နေမိတယ် .. ဒါပေမယ့် ဒီနေ့မိုးရွာတယ် .. ပြတင်းပေါက်ကနေ အပြင်ကိုငေးကြည့်နေရင်းနဲ့ သီချင်းလေးကို ဆိုမိရက်သားပေါ့ .. “ဝေးပြီးတစ်နေ့ ပြန်တွေ့ကြမယ် .. ယုံကြည်ထား မိုးစက်တွေရယ်” တဲ့ ..
ဒီလိုနဲ့ အိမ်အပြင်ကို လမ်းလျှောက်ထွက်လာခဲ့တယ် .. မိုးရွာထားတော့ သစ်ပင်တွေ မြက်ပင်တွေ အားလုံးအစိမ်းအစိမ်းတွေကြီးပဲ .. မနေနိုင်မထိုင်နိုင် သီချင်းတစ်ပုဒ် ဆိုမိတာက “All I see is green” ... ကျားပေါက်ရဲ့ see green လေ .. သူပြောတဲ့ green က အသံထွက်ဆင်တူတဲ့ grin ကိုပြောချင်တာလို့ထင်တာပဲ .. Green Day အဖွဲ့ရဲ့ green ကလည်း အဲ့ grin ကိုပြောတာပဲ .. အဓိပ္ပါယ်က ဆေးခြောက်ရှုခြင်းတဲ့ .. “With no green I cant' be complete, When my dope is gone I hate you all, I'm not in peace till I score some more green” ဆိုတော့ ပိုမရှင်းသွားဘူးလား .. ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အဲ့သီချင်းကို ခဏခဏဆိုနေမိတာတော့ အမှန်ပဲ ..
ကွန်ကရစ်လမ်းမကြီးပေါ်မှာ တစ်ယောက်တည်းထိုင်နေမိတယ် .. ကောင်းကင်မှာ တိမ်တွေအဆုပ်လိုက် ထုနဲ့ထည်နဲ့တွေ့ရတော့ လှမ်းကိုင်ကြည့်ချင်လာတယ် .. လှမ်းကိုင်ကြည့်လိုက်လို့ လက်ထဲရောက်ရင် အငွေ့ပျံ ပျက်ပြယ်သွားမလားလို့ စိတ်ကူးယဉ် ကြည့်တော့ ထူးအိမ်သင်ဆိုထားတဲ့ တိမ်တွေအကြောင်းနာမည်နဲ့သီချင်းလေးကို ပြန် ကြားယောင်ရင်း ဆိုနေမိရော .. “တိမ်တွေဖွဲ့စည်းထား မြင်သာချိန်အခိုက်အတန့်လေးမှာ တိမ်တွေပြိုလဲသွား .. ” သီချင်းအေးအေးလေးနဲ့ ထူးအိမ်သင်ရဲ့ ကြည်လင်ချိုမြတဲ့အသံလေးနဲ့ လိုက်ဖက်မှုရှိလို့ အဲ့သီချင်းကိုတအားကြိုက်တယ် .. တိမ်တွေမြင်တိုင်းလည်း ဆိုမိတယ် ..
အိမ်ကိုပြန်တဲ့လမ်းမှာ စာမေးပွဲပြီးလို့ ကျောင်းတွေပိတ်သွားပြီဆိုတာကို တွေးတယ် ..“ရင်နာစွာပြန်လည်တွေးတိုင်း သတိရမိ နှစ်ကိုယ်တူညီ ချစ်ဖူးတဲ့တက္ကသိုလ်ဆီ” ပေါ့လေ .. “အချစ်ဆုံးရဲ့အပြုံးအရယ်လေးတွေ ပြန်မြင်ယောင်နေသည် .. မှုန်ရီရီ မျက်ဝန်းဝေသီ ..” ဆိုသလိုပဲ ကျောင်းက ချစ်စရာကောင်လေးရဲ့မျက်လုံးတွေကို တမ်းတနေသေး .. ကျောင်းပိတ်တော့ သိပ်ကိုပျင်းစရာကောင်းသွားပြီ .. တစ်မျိုးလည်းကောင်းပါတယ်လေ .. အသားမမည်းတော့ဘူးပေါ့ ဟိ ..
အိမ်ရောက်တော့ လူလည်းညောင်းလှပြီ .. မိုးကထပ်ရွာလာတော့ ချမ်းချမ်းဆီးဆီးနဲ့ အိပ်ချင်လာတယ် .. မိုးသံတွေနားထောင်ရင်း သစ်ပင်တွေ မြက်ပင်တွေ စိမ်းနေတဲ့ကွင်းပြင်ကြီးထဲကနေ တိမ်တွေကို မော့ကြည့်နေသလို အိပ်မက်မက်လာတယ် .. တိမ်တွေထဲမှာ ချစ်စရာကောင်လေးရဲ့ပုံလေးကပေါ်လို့ .. အိပ်ချင်တာလည်းမဟုတ်ဘဲ ခွေနေမိတဲ့ ကိုယ့်အဖြစ်ကိုယ် စဉ်းစားမိပြီးတော့မှ စိတ်ထဲမှာ ဆိုမိနေတဲ့သီချင်းက The Ants ရဲ့ “ငပျင်း !!!! .... ငပျင်း !!!!! ...”
ကဲ .. ပြီးလေ၏ ..။
နန်းညီတဂ်ထားတဲ့ ဆိုညည်းမိတဲ့သီချင်းများပို့စ်ပါ .. ထပ်တဂ်ခံရမယ့်လူများကတော့ ကိုကြီးဘရွတ်နဲ့ အောင်ဒီကန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင် ... ရေးကြပေတော့နော့ .........။
Posted by အိဖူး at 1:37 AM2comments: